အလုပ်မလုပ်ပဲ ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးပါမယ်။ စိတ်ဝင်စားရင်ဆက်သွယ်ပါ။ – Gentleman Magazine
အလုပ်မလုပ်ပဲ ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးပါမယ်။ စိတ်ဝင်စားရင်ဆက်သွယ်ပါ။
22/11/2015 23/05/2017 Admin
ကျွန်တော် Company တစ်ခု ထောင်ထားပါတယ်။ MP marketing ဆိုပြီး ကျွန်တော် company က ဘာရောင်းလဲ ဆိုတော့ ဘာမှ မရောင်းပါဘူး။ အဲ့တော့ Member ကြေးကို အခြေခံပြီး အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
(Basic ကို ရှင်းချင်ပါသဖြင့် Member ကြေးကို သာ တွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အချို့ ကတော့ Member ကြေး မသုံးပဲ မတန်တဆဈေးတင်ပြီး တွက်ပါသည်။ တချို့ ကတော့ Account ထိန်းသိမ်းခ စသည်ဖြင့် တွက်ပါသည်။)
ကျွန်တော့် Company က တစ်ခြားကုမ္ပဏီတွေ ထက်အားသာတဲ့ အချက်ကတော့ ကိုယ်က လူနှစ်ယောက်စည်းရုံးပေးရုံ နဲ့ အရင်းပြန်ရပါပြီ။ (ဘယ် Company မှ တစ်ဆင့်တည်းနဲ့ အရင်းမရပါ)
1st Step, (ပထမ အဆင့်)
2nd Step (ဒုတိယ အဆင့်)
အဲ့မှာ A နဲ့ B က လူ ၂ ယောက် စီ စည်းရုံးလိုက်ပါတယ်။ C,D,E,F ပေါ့။
3rd Step (တတိယ အဆင့်)
နောက်ဆက်တွဲ GH IJ KL MN တို့ 8 ယောက်ကို အသီးသီး စည်းရုံးလိုက်ပါတယ်။ အဲ့အတွက် CDEF တို့ က အဆင့်2မှာ AB ရသလို ရပါတယ်။
AB ကိုတော့ ဒီအဆင့်အတွက် ဆင့်ပွား လေးယောက်စီ ကနေ 250 စီရပါတယ်။ (A က CD ကနေ စည်းရုံးတဲ့ GHIJ စီက 250 စီရတော့ 1000 ထပ်ရပါတယ်။B လဲ အလာတူပါပဲ)
ဒီအဆင့်မှ ရှုံးသူ ၈ ယောက် အမြတ်ရတာ က ၃ ယောက်တည်းပါ။
နည်းနည်းတော့ သဘောပေါက်ပြီထင်ပါတယ်။ တစ်ဆင့်တိုးလာတိုင် 1000 စီတိုးရနေပါတယ်။ ရှုံးတဲ့သူဦးရေကလည်း တိုးတိုးလာပါတယ်။ရှေ့ဆက်လဲ ဒီလိုပဲ ဆက်သွားမှာပါ။ သေချာတာတစ်ချက်က ဘယ်တော့ မှ ရှုံးတဲ့သူ အရေအတွက် က အမြတ်ရသူ အရည်အတွက်ထက်မနည်းတော့ပါဘူး။ ဒါ ဆယ်တန်း GP သဘောပါပဲ။ အဲ့တော့ ဒီစနစ်ဟာ လူများစု ရဲ့ နစ်နာမှု ကိုအခြေခံပြီး လူနည်းစု က စားသုံးနေတာပါ။
ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော် Company မှာ အကျိုး ရမှာသေချာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့ လူနည်းစု အလွယ်တကူစားနေတဲ့ ပိုက်စံ ခင်ဗျားတို့ ကို ယုံကြည်တဲ့ လူများစုရဲ့ ပိုက်ဆံတွေပါ။ ခင်ဗျားတို့ စားဖို့ စိတ်သန့် ရင် ကျွန်တော် တို့ Company က Welcome ပါ။………
P.S. အသေးစိတ်ဆွေးနွေးလိုပါက cb ကတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ပါ။
ကြှနျတျော Company တဈခု ထောငျထားပါတယျ။ MP marketing ဆိုပွီး ကြှနျတျော company က ဘာရောငျးလဲ ဆိုတော့ ဘာမှ မရောငျးပါဘူး။ အဲ့တော့ Member ကွေးကို အခွခေံပွီး အလုပျလုပျပါတယျ။
(Basic ကို ရှငျးခငျြပါသဖွငျ့ Member ကွေးကို သာ တှကျခွငျး ဖွဈပါသညျ။ အခြို့ ကတော့ Member ကွေး မသုံးပဲ မတနျတဆစြေးတငျပွီး တှကျပါသညျ။ တခြို့ ကတော့ Account ထိနျးသိမျးခ စသညျဖွငျ့ တှကျပါသညျ။)
ကြှနျတေျာ့ Company က တဈခွားကုမ်ပဏီတှေ ထကျအားသာတဲ့ အခကျြကတော့ ကိုယျက လူနှဈယောကျစညျးရုံးပေးရုံ နဲ့ အရငျးပွနျရပါပွီ။ (ဘယျ Company မှ တဈဆငျ့တညျးနဲ့ အရငျးမရပါ)
ကြှနျတျောတို့ Company က Member ကွေး ၁၀၀၀ သှငျးရပါသညျ။ ပွီးတော့ ၂ ယောကျကို ထပျစညျးရုံးပေးရပါမယျ။
Mr. A နဲ့ B က 1000 စီ သှငျးပွီး Member ဝငျလိုကျကွပါတယျ။
1st Step, (ပထမ အဆငျ့)
လူ နှဈယောကျ အရှုံး ပျေါပွီး တဈယောကျ မွတျနပေါတယျ။
2nd Step (ဒုတိယ အဆငျ့)
အဲ့မှာ A နဲ့ B က လူ ၂ ယောကျ စီ စညျးရုံးလိုကျပါတယျ။ C,D,E,F ပေါ့။
ကြှနျတျော က A နဲ့ B အတှကျ သူလကျအောကျက တဈယောကျစီ အတှကျ 500 စီပေးပါတယျ။
သဘောက A လကျအောကျ က C နဲ့ D စီက A က 500 စီရပါတယျ။ B ကလဲ အလားတူပါတယျ။ ကြှနျတျော ကတော့ တဈယောကျစီက 500 စီထပျရလိုကျပါတယျ။
ဒီအထိ မှာ ဆိုငျ အမွတျ နတော အီဖကေိုယျပဲ ရှိပွီး A နဲ့ B ကတော့ save side ရောကျသှားပါပွီ။ CDEF ကတော့ ရှုံးနတေဲ့အတှကျ 1 ယောကျမွတျ4ယောကျရှုံးနပေါတယျ။
3rd Step (တတိယ အဆငျ့)
CDEF ကလဲ အရှုံးတော့ ဘယျခံ မလဲ။
နောကျဆကျတှဲ GH IJ KL MN တို့ 8 ယောကျကို အသီးသီး စညျးရုံးလိုကျပါတယျ။ အဲ့အတှကျ CDEF တို့ က အဆငျ့2မှာ AB ရသလို ရပါတယျ။
AB ကိုတော့ ဒီအဆငျ့အတှကျ ဆငျ့ပှား လေးယောကျစီ ကနေ 250 စီရပါတယျ။ (A က CD ကနေ စညျးရုံးတဲ့ GHIJ စီက 250 စီရတော့ 1000 ထပျရပါတယျ။B လဲ အလာတူပါပဲ)
ဒီအဆငျ့မှ ရှုံးသူ ၈ ယောကျ အမွတျရတာ က ၃ ယောကျတညျးပါ။
နညျးနညျးတော့ သဘောပေါကျပွီထငျပါတယျ။ တဈဆငျ့တိုးလာတိုငျ 1000 စီတိုးရနပေါတယျ။ ရှုံးတဲ့သူဦးရကေလညျး တိုးတိုးလာပါတယျ။ရှဆေ့ကျလဲ ဒီလိုပဲ ဆကျသှားမှာပါ။ သခြောတာတဈခကျြက ဘယျတော့ မှ ရှုံးတဲ့သူ အရအေတှကျ က အမွတျရသူ အရညျအတှကျထကျမနညျးတော့ပါဘူး။ ဒါ ဆယျတနျး GP သဘောပါပဲ။ အဲ့တော့ ဒီစနဈဟာ လူမြားစု ရဲ့ နဈနာမှု ကိုအခွခေံပွီး လူနညျးစု က စားသုံးနတောပါ။
ခငျဗြားတို့ ကြှနျတျော Company မှာ အကြိုး ရမှာသခြောပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ခငျဗြားတို့ လူနညျးစု အလှယျတကူစားနတေဲ့ ပိုကျစံ ခငျဗြားတို့ ကို ယုံကွညျတဲ့ လူမြားစုရဲ့ ပိုကျဆံတှပေါ။ ခငျဗြားတို့ စားဖို့ စိတျသနျ့ ရငျ ကြှနျတျော တို့ Company က Welcome ပါ။………
P.S. အသေးစိတျဆှေးနှေးလိုပါက cb ကတဈဆငျ့ဆကျသှယျပါ။
Previous: လုပ်စရာအရေးကိစ္စတွေကို အကျိုးရှိရှိပြီးမြောက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်
Next: အသေးစား စီးပွားရေး လုပ်ငန်း တစ်ခုအတွက် ဖောက်သည်ရှာခြင်း